စက်ရုံ ကြီးကြပ် | Job in Myanmar ﻿
စက်ရုံ ကြီးကြပ် M (1)
19.8.2020, အချိန်ပြည့် , Consulting / Professional Services
ကုမ္ပဏီ: Recyglo Co., Ltd.
To becomealeading waste management solution platform in Southeast Asia that produces zero waste and zero carbon footprint.
To process material inasafe, non-hazardous manner with an aim to keep the world environmentally clean.
Introduceawaste management system in Southeast Asia to developaproper waste management and recycling culture.- Fully aircon
- Free flow coffee
- good toilets
- easy access to transportation
- monthly phone bill allowance
- table tennis access
- monthly refreshment activity- Flat and Flexible
-	ပလပ်စတစ်စက်ရုံရှိ ၀န်ထမ်းများနှင့် စက်ရုံ၏လုပ်ငန်းဆောင်တာ များအား ကြီး ကြပ်ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။
-	စက်ရုံရှိ စက်ပစ္စည်းများကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရမည်။
-	စက်ရုံ၏လုံခြုံရေးနှင့် စက်ပစ္စည်းများသန့်ရှင်းရေးတွင် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရမည်။
- စက်ရုံ၏နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများ နှင့် ထူးခြားဖြစ်စဉ်များအား သက်ဆိုင်ရာ မန်နေဂျာများသို့ တင်ပြ အစီရင်ခံရမည်။
- သက်ဆိုင်ရာ မန်နေဂျာများ၏ ညွှန်ကြားချက်များအားလိုက်နာရမည်။
- အသင်းအဖွဲ့နှင့် အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
- အသက် ၃၀ မှ ၅၀ အတွင်း ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်ပြီး သွက်လက်ဖြတ်လတ်ရမည်။
-	စက်ရုံများ တွင် လုပ်ကိုင်ဖူးသူ ဖြစ်ရမည်။
-	ရန်ကုန်ရွာသာကြီး စက်မှုဇုံ အနီးတ၀ိုက် နေထိုင်သူ (သို့မဟုတ်) စက်ရုံတွင် နေထိုင်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။
- ရိုးသားကြိုးစားပြီး ဦးဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
- အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်သူ ဖြစ်ရမည်။
- တက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့တစ်ခုရထားရမည်။
ဘာသာစကားများ မြန်မာ (Excellent/ Native speaker)
ကျွန်တော်တို.ကမ်းလှမ်းသည် Accomodation ကို ပံ့ပိုးပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
အလုပ်တည်နေရာ တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။
ကမ်းလှမ်းထားသောလစာ 300000 - 700000 Ks အတွက် လ
Job details အလုပ်အမျိုးအစား: Manufacturing jobs
Company Industry: Waster Management and recycling
စက်ကိုင်ဝန်ထမ်း M (3)
684 နေ့များ, အချိန်ပြည့် , Consulting / Professional Services
-	ပလပ်စတစ် စက်ရုံရှိ စက်ပစ္စည်းများအားကောင်းစွာ လည်ပတ် နိုင်ရမည်။ -	ရိုးသားကြိုးစားပြီး အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ - စက်ရုံရှိ စက်ပစ္စည်းများသန့်ရှင်းရေးနှင့် စက်ရုံလုံခြုံရေး များတွင် ကူ� ...
Vision To becomealeading waste management solution platform in Southeast Asia that produces zero waste and zero carbon footprint. Mission To process material inasafe, non-hazardous manner with an aim to keep the world environmentally clean. Purpose Introduceawaste management system in Southeast Asia to developaproper waste management and recycling culture.
- Fully aircon - high-speed internet - Free flow coffee - good toilets - easy access to transportation - monthly phone bill allowance - table tennis access - learning opportunities - monthly refreshment activity
- Flat and Flexible - Innovate - Learning - Leadership
684 နေ့များ, အချိန်ပြည့် , 300 000 - 700 000 Ks, Consulting / Professional Services
-	ပလပ်စတစ်စက်ရုံရှိ ၀န်ထမ်းများနှင့် စက်ရုံ၏လုပ်ငန်းဆောင်တာ များအား ကြီး ကြပ်ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။ -	စက်ရုံရှိ စက်ပစ္စည်းများကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရမည်။ -	စက်ရုံ၏လုံခြုံရေးနှင့် စက်ပစ္စည်းများသန်� ...
စက်ရုံ ကြီးကြပ် ရန်ကုန်ရွာသာကြီး စက်မှုဇုံ ပလပ်စတစ်စက်ရုံ Manufacturing jobs Manufacturing jobs Waster Management and recycling မြန်မာနိုင်ငံရှိ အလုပ်များ၊ ရန်ကုန်ရှိအလုပ်များ
Get job in Bago today. Apply online at www.jobsinyangon.com and find your dream job now. Our job specialist will help you to get the best jobs in Bago.